Shirka Guddiga Farsamada oo ka furmay Baydhabo (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shirka Guddiga Farsamada oo ka furmay Baydhabo (SAWIRRO)
Shirka Guddiga Farsamada oo ka furmay Baydhabo (SAWIRRO)
Afar iyo tobanka xubnood ee Guddiga Farsamada ayaa maanta gaaray Magaalada Baydhabo, iyadoo gelinkii dambena uu uga furmay shirka ay magaaladaasi ku leeyihiin.
Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shirka furay. Ra’iisal Wasaaraha oo muuqaalka foggaan-aragga uga qaybgalay shirkaasi ayaa Guddiga Farsamada kula dardaarmay in ay si hufan oo daacadnimo ah u gutaan shaqada loo igmaday.
Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ayaa magacaabay min laba xubnood oo Guddiga Farsamada ah, si ay u qaban-qaabiyaan shirka wadatashiga ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Guddiga ayaa sidoo kale go’aan ka soo saari doono halka lagu qabanayo shirka wadatashiga, haddii uu horaan muran ka dhashay goobta ay tahay in lagu qabto.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 9-kii bishan ku baaqay in Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir shir isugu yimaadaan Magaalada Garoowe, 15-ka bishan oo maanta ku beegneyd, inkastoo ay Puntland ka hortimid. Puntland ayaana dhankeeda soo jeedisay in shirkaasi lagu qabto Caasimadda Muqdisho.
Previous articleShirkii uu Madaxweyne Farmaajo ku baaqay oo maanta furmi doonin
Next articleWasiir Khayre oo sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno Shabaab ah